Mozilla inogadzirisa chakakomba bug muFirefox 52 mumaawa makumi maviri nemaviri chete | Linux Vakapindwa muropa
Mozilla inogadzirisa yakakomba Firefox 52 bug mumaawa makumi maviri nemaviri chete
Vhiki rapfuura pakanga paine hackathon yakarongedzwa nedzimwe nhengo dzeMozilla Foundation. Iyi hackathon yakatsvaga kana yakanangana nekuona kushomeka muzvirongwa zvinozivikanwa zvaive zvisati zvawanikwa.
Ichi chiitiko chaive nemubairo wakakosha wemapoka kana vagadziri vakawana chimwe chinhu uye ngatiende kana vawana chimwe chinhu. Pakazara, anopfuura makumi matatu mabugs akakomba akawanikwa, asi chimwe chazvo ndicho chakakwira kumukurumbira. Bhugi rakabata Mozilla Firefox 52 uye rakagadziriswa mumaawa makumi maviri nemaviri chete.
Chiitiko ichi yaidaidzwa kuti Pwn2Own, hackathon inehunyanzvi mukutsvaga tsikidzi. Rakanga riri boka kubva kuYunivhesiti yeChaitin, kuChina, rakawana bhagi rakakura raibvumira mutengesi kana pirate kutora simba rehurongwa hwekushanda, zvese ndatenda uchishandisa createImageBitmap API. Bhenji rekuyedza kuti uwane kusagadzikana iri raive Mozilla Firefox 52 pane Microsoft inoshanda sisitimu, kunyange hazvo zvese zvichiratidza kuti iyo API ine dambudziko nechero inoshanda system.
Iyo Mozilla Foundation yakagadzirisa chakakomba bhegi mumaawa makumi maviri nemaviri chete
Izvi zvakawanikwa pakupera kwesvondo rapfuura, kunyanya China rapfuura uye mumaawa makumi maviri nemaviri chete, Chishanu chapfuura, Mozilla yakwanisa kuvhura inogadzirisa inogadzirisa kusagadzikana uku, ichiita kuti webhu saiti ive yakachengeteka zvishoma. Uku kunetseka yakapihwa mubairo we $ 30.000, mubairo mudiki uchienzaniswa nemubairo wese wakapihwa, anodarika $ 830.000.
Mari pamwe nekuvapo kwetsikidzi muMozilla Firefox zvakajairika, haisi nguva yekutanga kana kuzove kekupedzisira, zvisinei, chokwadi chekuti dambudziko rakagadziriswa pasingasviki zuva riri kurova. Maawa makumi maviri nemaviri anga akwana kugadzirisa dambudziko iri. Zvekare zvakare zvinofemerwa kuti Mahara Software haisi mukukanganisa zvine chekuita neyakavanzika Software, pane kudaro, mune dzakawanda mamiriro zvinonyanya kubatsira
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Mozilla inogadzirisa yakakomba Firefox 52 bug mumaawa makumi maviri nemaviri chete
Havana kuwana chero mabhugi muEdge nekuti ivo vaifanira kutanga vaudza vanhu kuti yaive xD; P
Pindura kuna nasher87arg
Kuwana iyo bug muEdge kwaive nyore. Dambudziko raive rekumhan'arira kuMicrosoft.